ယူနိက်တက်မှာဆက်နေချင်လို့ လစာလျော့ယူမယ်ဆိုတောင် အသင်းက ထွက်ခွာရဖွယ်ရှိနေတဲ့ ကစားသမား – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းမှာ ကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်ချင်လို့ ယူနိက်တက်ဝါရင့်ကစားသမားမာတာဟာ လစာလျော့ယူမယ်ဆိုတာတောင် အသင်းကနေ ထွက်ခွာရဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။
ယူနိက်တက်အသင်းမှာ လာမယ့်နွေမှာ အသင်းက ကစားသမား ၁၀ယောက်လောက်ထိ ရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိနေပြီး အဲ့ဒီထဲမှာ မာတာလည်း ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မာတာဟာ အသင်းအတွက် နစ်ပေါင်းများစွာပေးဆပ်ခဲ့သလို သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝသက်တမ်းကို ယူနိက်တက်မှာကုန်ဆုံးလိုစိတ်ရှိပေမယ့် အသင်းအနေနဲ့တော့ လာမယ့်နွေမှာ ထိပ်တန်းကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့ရှိနေတဲ့အတွက် ကစားသမားအမြောက်အမြားရောင်းချဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတာပါ။
လက်ရှိမှာလည်း ရိုးမားအသင်းရဲ့ နည်းပြသစ်ဖြစ်လာမယ့် မော်ရင်ဟိုက သူ့အနေနဲ့ ယူနိက်တက်အသင်းက ကစားသမား ၃ယောက်ကို လိုချင်နေတယ်လို့ပြောထားပြီး သူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေက မာတစ် မာတာနဲ့ဒီဂီယာတို့ဖြစ်နေပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ယူနိက်တက်နည်းပြဆိုလ်းရှားကတော့ မာတာနဲ့ပက်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာတော့မချရသေးကြောင်းခုလိုဆိုလာပါတယ်၊
“ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်စရိုက် ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားကို အသင်းရဲ့လူစာရင်းထဲကနေလက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတာ ခက်ခဲလှပါတယ်။ မာတာရဲ့ကစားသမားဘဝကို အသင်းမှာဆက်ရှိနေစေချင်တာလား? ဒါမှမဟုတ်အသင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့်ပေးစေချင်တာလား?ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ အတိအကျနဲ့မဖြေပေးနိုင်သေးပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ခုထက်ထိ သူ့အနာဂါတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှမရသေးလို့ပါပဲ”လို့ဆိုပါတယ်။
ယူနိက်တက်ရဲ့နည်းပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ မော်ရင်ဟိုကတော့ သူကိုင်တွယ်မယ့်ရိုးမားအသင်းကို မာတာ မာတစ်တို့ကိုခေါ်ယူချင်နေပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ မန်ဖန်ပရိတ်သတ်ကြီးရောမာတာကို အသင်းကနေထွက်ခွာသွားစေချင်ပါသလား???